Netflix waxay ku dari kartaa Space Audio dhowaan | Waxaan ka socdaa mac
Iswaafajinta noocan ah maqalka ayaa hada ahmiyada koowaad u leh Netflix iyo in kabadan kadib dhowr adeeg oo hoormo ah oo aan hada haysanno. Runtii Apple TV +, Disney + ama Hulu waa kuwa hadda bixiya tan taageero loogu talagalay maqalka 'Spatial Audio' ee AirPods Pro iyo AirPods Max.
Toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa #podcastapple iyo kiiska Apple TV ee ay tahay inuu la jaanqaado tikniyoolajiyadan maadaama ay si buuxda kuugu quusinayso khibrad maqal oo ka duwan oo cajiib ah. Hadda Sanduuqa sare ee Apple ayaan la jaan qaadi karin laakiin waxaa la filayaa inuu soo saaro jiil cusub taas oo ahIn kasta oo ay taasi dhacdo, waxaa la cusbooneysiinayaa adeegyada fidinta fiidiyowga.
Netflix waxay lahaan laheyd Space Audio dhowaan
Waxayna u muuqataa inay tijaabinayaan teknoolojiyada maqalka ee adeeggan sida la sheegay iPhoneSoft. Dabcan, taageeradani waxay gaar u noqon lahayd iphone iyo ipad. Dhinaca kale, waa in la sheegaa in kaliya qaar ka mid ah taxanaha iyo waxyaabaha la heli karo loo dooran doono bilowgan, ma aha waxyaabaha oo dhan.
Runtu waxay tahay in tani ay tahay hal ikhtiyaar oo dheeri ah oo lagu dari doono liiska hagaajinta adeegyo badan waana taas sababta Netflix ay u tijaabineysay dhowr toddobaad, sida lagu sheegay warbixinta, waa la arki doonaa marka ay bilaabaan. si hubaal ah, waqtigan la joogo ma jiro taariikh cayiman oo loo qabtay markaa waa inaan sugnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Netflix waxay ku dari kartaa Space Audio dhowaan
Iyo… goorma in muusikada ??
Mawjadaha, tusaale ahaan Horay ayaad u haysatay ...
Ku jawaab Flx
Bogagga, Nambarada, iyo cusboonaysiinta muhiimka ah
Kuo wuxuu miiraa astaamaha MacBook Pro ee soo socda